Personal Image နဲ့ Personal Brand: ဘယ်ဟာက ပိုအရေးကြီးသလဲ? • Brand You Academy
Personal Image နဲ့ Personal Brand: ဘယ်ဟာက ပိုအရေးကြီးသလဲ?
ပုံရိပ် (Image) ဆိုတာ လူတွေက သင့်ကို ဘယ်လိုမြင်လဲကို ဆိုလိုတာပါ။ သင်စကားပြောတဲ့ပုံစံ၊ ဝတ်ပုံစားပုံ၊ လမ်းလျှောက်ပုံ၊ စားသောက်ပုံ… ဒါတွေကိုပြောတာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်ဟာ လုပ်ငန်းခွင်၊ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ လူအများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအစရှိတဲ့ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ဘက်ပေါင်းစုံမှာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ Personal Image မှာ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ၊ အရောင်ရွေးချယ်မှု၊ စကားပြောဆိုပုံနဲ့ အခြားသူများနှင့်ပြုမူဆက်ဆံပုံ စသဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်နဲ့ ဘဝအောင်မြင်မှုကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာတော့ Personal Branding ဆိုတာ သင့်ရဲ့ အားသာချက်၊ စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှု၊ တန်ဖိုးထားမှုနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတို့ကို ပေါင်းစုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တသမတ်တည်း ပြုမူနေထိုင်မယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြော်ငြာနေမယ်၊ အများကို တင်ပြနေမယ်ဆိုမှသာလျှင် ကိုယ့်ရဲ့ Personal Brand တစ်ခု အသက်ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူအများနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နေရာမှာ တစ်ဖက်လူက ကိုယ့်ရဲ့ ပုံပန်းသွင်ပြင်၊ ပြောဆိုဆက်ဆံပုံကိုကြည့်ပြီး သင် ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်အရာတွေကို တန်ဖိုးထားလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။ ပြင်ပသွင်ပြင်တစ်ခုတည်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်တာ သင့်အတွက် မမျှတကောင်းဖြစ်ပေမယ့် တစ်ဖက်လူအတွက်တော့ ဒါဟာအမှန်တကယ်လို့ ထင်စရာကောင်းပါတယ်။ အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် Personal Branding ဆိုတာ ပုံရိပ်အပါအဝင် သင်ရဲ့ လူတစ်ယောက်လုံးကို တင်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မှန်ကန်တဲ့ အရည်အချင်းတွေကိုသာ ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ပြိုင်ဖက်နဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေကြားမှာ ထင်ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Personal Branding ဆိုသည်မှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ဖန်တီးပြီး နာမည်ကောင်းတစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရည်အချင်းတွေကနေတဆင့် ကိုယ် ဘာကိုပြောချင်တာလဲ၊ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ တန်ဖိုးထားမှု၊ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ဖော်ပြလို့ရပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ Personal brand တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုရင် သင့်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့အရည်အချင်းတွေကို ရွေးထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ပန်းတိုင်၊ အနာဂတ်အမြင်၊ စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှု၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှင်းလင်းပြတ်သားအောင် လုပ်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူက တန်ဖိုးထားမှုတွေနဲ့ ထပ်တူကျရဲ့လားဆိုတာကို အချိန်နှင့်အမျှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းထုတ်ပါ။
Personal Brand တစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် အကြံပြုချက် (၃) ချက်ကတော့ –
– သင့်ကို အမှန်တကယ်ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကို ရွေးထုတ်ပါ။
– ကိုယ်ပိုင်စတိုင် သတ်မှတ်ပါ။ တခြားသူတစ်ယောက်လိုဖြစ်အောင် ဖန်တီးယူဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ စစ်မှန်ခြင်းက သင့်ကို တောက်ပစေပေမယ့် ဟန်ဆောင်မယ်ဆိုရင် သင့်ကို မယုံကြည်ရတဲ့လူ၊ အတုအယောင်လိုမျိုး ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
– ကိုယ့်ကိုယ်ကို တည်ဆောက်ပါ။ စာဖတ်ပါ။ ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နယ်ပယ်မှာ အသိပညာဗဟုသုတကြွယ်ဝအောင် လုပ်ပါ။ ပြီးတော့ ပြန်အသုံးချပါ။
နာမည်ကောင်းတစ်ခုကို ရက်တိုတိုလေးနဲ့ ပုံဖော်ယူလို့မရပါဘူး။ အချိန်တွေ အများကြီးပေးရတယ်။ လုံ့လစိုက်ထုတ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ထိုက်တန်မှုတစ်ခုကို ပြန်ရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ရှိခြင်းက လူအများကြားမှာ ထင်ပေါ်စေပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါတယ်။ လူတိုင်း ကိုယ်ဘယ်သူလဲ၊ ကိုယ်ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ Brand တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့် ကိုယ်ပိုင် Personal Brand ကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပဲဖြစ်စေ၊ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်ပဲဖြစ်စေ လူတိုင်း မဖြစ်မနေ တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က ကိုယ်ပိုင် Personal Brand ကို မတည်ဆောက်ထားဘူးဆိုရင် သူများက ကိုယ့်ကို တံဆိပ်လာကပ်တာကို ခံရမှာပါ။ တကယ်လို့ ကိုယ်သာ ကောင်းမွန်တဲ့ Personal Brand တစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားမယ်ဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အလုပ်ရှာတာ၊ ရာထူးတိုးတာ၊ ဘဝလက်တွဲဖော် ဒါမှမဟုတ် ရာသက်ပန် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း ရှာတဲ့နေရာတွေမှာ ပိုပြီလွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
PrevPrevious8 Critical Things Millennial Fresh Graduates Need foraCompetitive Job Market
NextWhat are the Important Elements in Creating A Successful Personal Image?​Next